छाला राम्रो र मुलायम बनाउने प्रविधि पिलिंग के हो? के कुरामा ध्यान दिने? पिलिंग एउटा यस्तो प्रविधि हो, जसमा केमिकल सोलुसनको प्रयोग गरि छालाको बनावटलाई राम्रो तथा मुलायम बनाइन्छ। यो प्रविधि अति उपयुक्त हो तर यो अस्थायी हो। मंगलबार, चैत २९, २०७८
घरमा पार्किन्सन्सका बिरामी छन्? यी कुरा ख्याल गरौं बिरामीलाई खाना खान र निल्न गार्‍हो हुने भएकाले नरम खाना खुवाउनु पर्छ, कहिलेकाँही ट्युबको सहायतासमेत लिनुपर्ने हुन्छ।खाना खाने समयमा निल्न गार्‍हो हुने भएकाले सर्केर निमोनिया भई मृत्यु पनि हुनसक्छ। सोमबार, चैत २८, २०७८
के हो हड्डी र मांसपेशी दुख्ने रोग फाइब्रोमायाल्जिया? कसरी पहिचान गर्ने? यस रोगको दुखाई मुख्यतः घाँटी, कम्मरमुनिको भाग तथा हातहरुमा हुन्छ, तर शरीरका अन्य भागमा पनि दुखाईलगायतका अन्य लक्षण हुने सम्भावना पनि रहन्छ। यस रोगका केही बिरामीहरु टाउकोको दुखाई, अनुहारको मांसपेशी तथा जोर्नीहरुको दुखाई लिएर अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। शुक्रबार, चैत २५, २०७८
रेबिजको आक्रामक उपस्थिति! खोप छ, तर कहाँ चुक्दै छौं? प्रतिबद्धता आफैमा सह्रानीय भएपनि हाल देखिदै आइरहेका नयाँ-नयाँ चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ ध्यान दिन भने सकेको देखिदैन। र यस्तै अवस्था रहिरहे 'सन् २०३०' को लक्ष्य पुरा हुनेमा प्रश्न बाचक चिन्ह खडा हुनेछ। बिहीबार, चैत २४, २०७८
एलर्जीको जाँच 'स्किन प्रिक टेस्ट' के हो? एलर्जीको समस्या संसारका करिब ३० देखि ४० प्रतिशत मानिसहरुमा रहेको अनुसन्धानहरुले देखाएको पाईन्छ। नेपालमा पनि ठुलो संख्यामा एलर्जीका बिरामीहरु छन्। तर हालसम्म यसको आधिकारिक तथ्यांक हामीसँग छैन। बुधबार, चैत २३, २०७८
के हो टाइफाइड? टाइफाइडबाट कसरी जोगिने? टाइफाइड भनेको सालमोनेला टाइफी र प्याराटाइफी भन्ने ब्याक्टेरियाको संक्रमणले हुने एक प्रकारको रोग हो। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिसामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दुषित खाना वा पानीको माध्यमबाट हुने गर्दछ। बुधबार, चैत २३, २०७८
रमजान र मधुमेह: रोजा बस्दा के गर्ने, के नगर्ने? कुरानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि यदि कुनै बिरामी छ भने 'छुटेको रोजा (ब्रत) अर्को समयमा पुरा गर्नुपर्दछ' किनकि 'अल्लाह तपाईंको लागि सहजता चाहन्छन् र तपाईलाई कठिनाइमा राख्न चाहदैनन्'। शुक्रबार, चैत १८, २०७८
मुसाले टोक्यो? 'र्‍याट बाइट फिबर' होला है! 'र्‍याट बाइट फिबर' अर्थात् 'मुसाले टोकाइले आउने ज्वरो' को चर्चा खासै हुने गर्दैन। यद्यपि भारतमा भने २३०० बर्ष पहिले देखि नै जानकारीमा रहेको पाइन्छ। आइतबार, चैत १३, २०७८
मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरुले आखाँमा पार्ने असर र निदानका उपाय विद्युतीय उपकरणहरु (मोबाइल, ल्याबटप, ट्याब लगायत) का स्क्रीनको अत्याधिक प्रयोगले बालबालिकाका आँखामा के कस्ता असरहरु पर्छन र यसलाई रोकथाम गर्ने उपायहरु के–के हुन ? आइतबार, चैत १३, २०७८
अफ्रिका जाँदै हुनुहुन्छ? 'एलो फिबर' विरुद्धको खोप किन लगाउने? विश्व स्वास्थ संगठनकाले यो खोप विशेष गरेर ९ महिना मुनिका बालबालिका, गर्भवती, अन्डाको एलर्जी भएका र विभिन्न कारणले (रोग वा औषधि प्रयोगको कारणले) रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएकाहरुलाई भने यो खोप नलगाउन सुझाएको छ। शनिबार, चैत ५, २०७८
छाला जोगाएर यसरी खेलौँ होली, रङसँग खेल्नु अघि र पछि के गर्ने? बजारमा पाइने रसायनयुक्त रङले छालामा नराम्रो असर गर्छ। जसले गर्दा छाला पोल्ने, रातो हुने, एलर्जी हुने, इन्फेक्सन हुनूका साथै यस्ता रङले छालालाई सुक्खा र रुखो बनाइदिन्छ। केही उपाय अपनाएर छालालाई हानि हुनबाट बचाउन सकिन्छ। बिहीबार, चैत ३, २०७८
नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ? सपनाको त्राशले मनमा अशान्ति पैदा गर्छ भने राम्रो सपना देख्दा मन पनि खुशी हुन्छ। त्यसैले सपना सुल्टो वा उल्टो जे पनि हुन सक्छ, सपना नराम्रो देख्दा कुनै खतरा हुँदैन। आइतबार, फागुन २९, २०७८
छालामा जलन हुने, फोका आउने तथा चिलाउने समस्या 'एक्जिमा' के हो? कसरी जोगिने? एक्जिमा भनेको बहिरी छालामा देखिने समस्या हो। यो समस्यामा छालामा जलन, रातोपना, चिलाउने, अति सानो फोका र डल्लो आउने, अलि अलि पानी बगिरहने, छाला कडा हुने लक्षण देखिन्छ । शनिबार, फागुन २८, २०७८
ज्वरो आयो? 'म्यिउरिन टाइफस' पनि हुनसक्छ म्यिउरिन टाइफस' नियमित प्रयोगशाला परीक्षण अन्तर्गत नपर्ने भएकोले यसको वास्तविक भार/प्रभाव नेपालमा कति होला भनेर यकिन वा अनुमान भने गर्न सकिदैन। यसका लक्षणहरु टाइफाइडसँग मिल्दो जुल्दो हुदा बर्षौदेखि सोहि रोग भनेर संक्रमितहरुको उपचार गरिरहेको हुनसक्दछ। शुक्रबार, फागुन २७, २०७८
के बालबालिकालाई पनि मिर्गौला रोग लाग्छ? अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिने? मिर्गौला रोग भन्ने बित्तिकै आमरुपमा युवा तथा वृद्धवृद्धालाई मात्र लाग्ने रोग भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर, कलिला बालबालिकालाई पनि मिर्गौलाका धेरै रोगले सताएको हुन्छ। कलिलै उमेरमा मिर्गौला फेल भएर कति बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। बिहीबार, फागुन २६, २०७८
गर्भवती ९ महिना कटेपछि के गर्ने, के नगर्ने? विभिन्न औजारको प्रयोगमा सुत्केरी गराउनु पर्ने, योनिमार्ग तथा अन्य प्रजनन अंगहरुमा चोटपटक लाग्न सक्ने र धेरै रगत बग्न सक्ने अनि कहिलेकाहीँ अप्रेसन गरेर बच्चा जन्माउन पर्ने हुनसक्छ। बुधबार, फागुन २५, २०७८
के हो मिर्गौला क्यान्सर? लक्षण र बच्ने उपाय टाउकोदेखि खुट्टासम्मको जुनसुकै भागमा भित्रि तथा बाहिरी अंगमा क्यान्सर लाग्न सक्छ। विशेषगरी क्यान्सर रोग अस्वस्थ्य खानपान, अव्यवस्थित जीवनशैली, सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग र वंशाणुको कारणले हुन्छ। शनिबार, फागुन २१, २०७८
यी ५ कारणले गर्दा 'नरोकिएको रेबिज' कारणहरुको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न सके मात्र आगामी दिनहरुमा 'नरोकिएको रेबिज' रोगलाई रोक्न सकिने रोगमा परिणत गर्न सम्भब हुनेछ। बिहीबार, फागुन १९, २०७८
यस्ता छन् बुद्धि बंगाराका बारेमा थाहा पाउनु पर्ने तथ्यहरु हरेक कुनामा निस्किने तेस्रो बंगारालाई किन बुद्धि बंगारा भनियो भन्ने कुनै ठोस कारण नभए पनि मान्छे अलि परिपक्क भएपछि मुखमा देखिने भएकाले हुनसक्छ। सोमबार, फागुन १६, २०७८
हड्डी भाँचिएको उपचार: प्लास्टर लगाएपछि के गर्ने, के नगर्ने? कुनै पनि हड्डीको आकारमा टुटफुट भए त्यसलाई फुटेको, भाँचिएको वा फ्रयाक्चर भएको भनिन्छ। पछिल्लो समयमा आएर फ्रयाक्चरको परिभाषा केही परिमार्जित पनि भएको छ। शनिबार, फागुन १४, २०७८
भाषा परिवर्तन हुने रोग ‘एफएएस’ एक्कासी जब कुनै पनि मानिस आफ्नो सामान्यत बोलचालको भाषाभन्दा फरक प्रकारको पहिले कहिल्यै नजानेको, नबोलेको विदेशी लबजमा अर्थात् विदेशी उच्चारणमा बोल्न थाल्दछन् भने त्यो अवस्थालाई फरेन एक्सेन्ट सिन्ड्रोम (एफएएस) भनिन्छ। शुक्रबार, फागुन १३, २०७८
युरिक एसिड हुने कारण र बच्ने ८ उपाय एउटा स्वस्थ मानिसमा युरिक एसिडको मात्रा ६ दशमलब ८ एमजी/डिएल हुनुपर्छ। जसलाई गाउट वा युरिक एसिडको समस्या छ त्यस्ता व्यक्तिमा युरिक एसिडको मात्रा ५ एमजी/डिएलभन्दा कम राख्नुपर्ने हुन्छ। बिहीबार, फागुन १२, २०७८
बच्चालाई ज्वरो आउँदा हुने मिर्गी 'फेब्राइल सिजर' के हो? अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिने? प्राय ६ महिनादेखि पाँच वर्ष सम्मका बालबालिकामा ज्वरो आउँदा बच्चाको जिउ काम्ने, आँखा माथि फर्काउने, जिउ कडा हुने, दाँत बाँध्ने, हातगोडा सबै कम्पन हुने, मुखबाट फिँज निकाल्ने,दिसा पिसाब छोड्ने, बेहोस हुने समस्या देखिन सक्छ। मंगलबार, फागुन १०, २०७८
ओमिक्राेन नै कोरोना भाइरसको अन्तिम रूप होइन : डा सन्तोष दुलाल संक्रमणदर पूर्ण रुपमा शून्य भइसकेको छैन। अहिले पनि परीक्षणमा ५ देखि १० प्रतिशत संक्रमणदर छ। त्यसैले भीडभाड, सभा, सम्मेलन हुने ठाउँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै पर्छ। शुक्रबार, फागुन ६, २०७८
बर्डफ्लूको उच्च जोखिम कसलाई? यी लक्षण देखिए बर्डफ्लू हुनसक्छ यदि लक्षण जटिलता तिर गए श्वास-प्रश्वासमा समस्या, र बर्डफ्लू निमोनिया देखिन सक्नेछ। समयमा नै उपचार नपाए/ढिला भए संक्रमितको मृत्यु समेत हुनसक्दछ। दश बर्डफ्लू संक्रमित मध्ये ६ जनासम्मको मृत्यु हुनसक्दछ। मंगलबार, फागुन ३, २०७८
नेपालमा छारे रोग: जनस्वास्थ्यको चुनौती तथा समाधान नेपालमा अझै पनि छारे रोगको पहिचान र उपचार चुनौतीपूर्ण रहेकोमा दुई मत छैन। उचित उपचारको अभाव, अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, आर्थिक अभाव तथा सामाजिक भेदभाव जस्ता कारक तत्वहरुलाई निर्मूल पार्नु जरुरी छ। सोमबार, फागुन २, २०७८
कोभिड लागेका बच्चाहरुलाई घरमा कसरी स्याहार गर्ने? बालबालिकालाई कोभिडको जस्तो लक्षण देखिए सर्वप्रथम नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ। आवश्यक परे कोभिड सम्बन्धी जाँच गरे पश्चात यो रोगको बारेमा एकिन गर्न सकिन्छ। कडा लक्षण नभए र घरमा नै उपचार गर्न सल्लाह भए बच्चाहरुलाई घरमा नै स्याहार गर्न सकिन्छ। मंगलबार, माघ २५, २०७८
ओमिक्रोन रुपमा 'स्क्रब टाइफस' देखिँदै! ज्वरो आउनु, घाँटी दुख्नु, खोकी लाग्नु भनेको कोरोना मात्र होइन। तसर्थ हाल देखिदै गरेको स्क्रब टाइफसको पनि समयमा नै पहिचान र उपचार गर्न सके रोग पूर्ण रुपमा निको हुनेछ। सोमबार, माघ २४, २०७८